Umbono: Gcina ivoti lakho liyimfihlo ungaze uboshwe | News24
Umbono: Gcina ivoti lakho liyimfihlo ungaze uboshwe
Durban - Abe-IEC bakhipha isimemezelo sokuthi akukho semthethweni ukuthatha izithombe uveza ivoti lakho, kodwa sengathi abantu abalaleli.
Lesi sixwayiso sakhishwa ngenyanga edlule, kanti kusaqalwe amavoti akhethekile, kodwa sekukhona abantu abazithole otakwini lokuveza izithombe zamavoti abo ezinkundleni zokuxhumana.
UDJ Sox kanye neMeya yaseMhlathuze iMdu Mhlongo bavele ephepheni iSOLEZWE beveza amavoti abo.
Ngisho sekuthiwa ujabule kangakanani ngokuvotela iqembu lakho elikhethekile, funda ukuzibamba kube kanye nje.
Thulani Myeki Yazi abantu le nkululeko yabo ibagulisa ngamakhanda baze bangabe besafuna ukugcina umthetho, ukuthi ukhululekile lokho akukaze kwasho ukuthi phambana nomthetho obekiwe, labo-DJ iyaxaka nje eyabo ngoba bafana nabaholi kubantu kodwa benza izinto ezibhedayo ngathi bangambopha ngoba kuwumthetho owabekwa i-IEC.
Njabulo Lethabo Simelane Ivoti lami aliyona imfihlo kodwa yintando, kukimi ngikhetha liphi qembu ngizovota noma angeke ngiyalishutha ngilifaka ezinkundleni zokuxhumana konke lokho kukimi ayifune muntu leyo!!!
Sthe Eric Phato Akaboshwe loyo batheni na bona oDj laba ngathi bafuna ukuphuma esandleni nje yingako nje sithenga ama-fake wama CD wabo ngoba bayabheda bona ngabe balwa nalabantu abadayisa umculo wabo emigwaqeni balibele yipolitiki izobenzelani.
Maxe Khothakome Mkhize Uma bengezwa abantu abadumile kmele kwenziwe njan ngoba i-IEC isidonse ngamadlebe yathi akungashuthwa voti futhi alibe imfihlo.kodwa lohluthukani nesihluthu sase angola ubhizi uzophula umthothe ebe ewazi kahle futh eyi display ebantwin abaningi.